UNINZI LOMYILI WEMPAHLA YOKUNXIBA YOMTSHATO UNELAYINI ENTSHA YOKUNCINCI: EKHETHEKILEYO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UMyili ngasemva kwesinxibo somtshato esityunjwe kakhulu ukusuka kwiLace yoLuthandazo Lace Unomgca omtsha ngokuNcinci
UMyili ngasemva kwesinxibo somtshato esityunjwe kakhulu ukusuka kwiLace yoLuthandazo Lace Unomgca omtsha ngokuNcinci
Ngu: Esther Lee 11/17/2017 ngo-10: 45 AM
uluhlu lweefoto zomfoti womtshato
Ukucofa okungaphezulu okuzayo. Ukulandela impumelelo enkulu yemidiya yoluntu, uphawu lomtshato waseAustralia uGrace Loves Lace ngoku iyaqhubeka nokwandisa iminikelo yayo ukuze ifikeleleke ngakumbi-kwaye ifikeleleke ebantwini. I-Lace Lace Lace-eyaziwa njengegama elingemva kwengubo yomtshato ekhonkxwe kakhulu kwiPinterest -shiye nje ingqokelela entsha ye-capsule kule veki nazo zonke iigawuni ezili-10 ezinamaxabiso aphantsi kwe- $ 1250.
Ukuqokelelwa okukodwa, ogama linguLes Deux, kudibanisa umxube wee gown ezintlanu kunye neeseti ezintlanu ezinamaqhina afanelekileyo kumtshakazi weGrace Loves Lace. Ungumfazi wesitayile, isiyobisi, ukuthanda, umseki kunye nomyili UMegan Ziems uxela Ingcaciso womtshakazi weLace Lace Lace. Unomdla, okrelekrele, okwehlabathi, uyayixabisa kwaye angayibona ubunewunewu, kwaye unomoya wokuzonwabisa ngaye-uyinyani ekule mihla nakwelixesha kunzima ukuza kuyo.
IHadley, i-810 yeedola, i-Les Deux ye-Lace Lace Lace. (Ityala: Umtya othanda intambo)
I-Ziems icacisa ngakumbi malunga nokunyaniseka ngakumbi xa kufikwa kumba wokunxiba komtshato. [Uyamlahla] 'umfaniswano' womtshato wesintu kwaye uyinzwakazi epheleleyo yendalo enomphefumlo wonke, uyongeza. Siyazingca ngokumela lo mfazi kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo, ubukhulu, iinkcubeko; abafazi be-GLL ngokuqinisekileyo batsalelekile omnye komnye, kukho unxibelelwano olomeleleyo.
Kuyilo, inkuthazo esemva komgca iqale ngesitayile somzamo sabafazi baseFrance. Ekugqibeleni, yonke into endiyenzayo iphefumlelwe ngumfazi omele ngokuqatha i-GLL, uyaziva. AmaFrentshi ayaziwa ngokuba… ’avuke nje ngoluhlobo olukhokelele kwezi ziqwenga. Unokuzibamba iinwele zakho ngokoqobo, ubeke imilebe kunye nesidlele, utyibilishe enye yeelokhwe - zonke zolule kwaye azinamsindo kwaphela-kwaye ulungile. I-GLL yayiyeyokuqala ukwaphula loo nto yayiyinto 'yomtshato' kwi2010.
iingoma zelizwe zokudlala emtshatweni
I-Everley, i-990 yeedola, i-Les Deux ye-Lace Lace Lace. (Ityala: Umtya othanda intambo)
I-Cruz, i-540 yeedola, i-Les Deux ye-Lace Lace Lace. (Ityala: Umtya othanda intambo)
Umyili uthi wayefuna ukubandakanya umgangatho kunye nokunethezeka kumgca weLes Deux, kodwa konke kugcinwa kwinqanaba lamaxabiso okhuphiswano. Izambatho zifumaneka kuphela kwiwebhusayithi okanye kwigumbi lokubonisa elinamaxabiso aqala kwi- $ 540 ukuya kwi- $ 1250.
Besisoloko sibonelela ngezinto zoyilo ngexabiso elifikelelekayo ngokwenyani lokuthelekisa okwenziwe ngezandla ngumfazi oza kwenziwa xa kuthelekiswa nolunye ushishino, utshilo uZiems. Kwakungesinye sezizathu zokuba ndiqalise i-GLL. Ukunikezela ngemveliso yokunethezeka ngexabiso elifikelelekayo yeyona nto siyenzayo.
I-Sloane, i-1130 yeedola, i-Les Deux ye-Lace Lace Lace. (Ityala: Umtya othanda intambo)
I-Saffi, i-990 yeedola, i-Les Deux ye-Lace Lace Lace. (Ityala: Umtya othanda intambo)
ndinithanda iikowuti ezinde
I-Piper, i-1130 yeedola, i-Les Deux ye-Lace Lace Lace. (Ityala: Umtya othanda intambo)
I-Perla, i-990 yeedola, i-Les Deux ye-Lace Lace Lace. (Ityala: Umtya othanda intambo)
I-Luna, i-1210 yeedola, i-Les Deux ye-Lace Lace Lace. (Ityala: Umtya othanda intambo)
Ukuthandwa kwesinxibo sikaHollie — eyona ilokhwe iqhotyoshelweyo kwiqonga lezentlalo- kuye kwayinceda iGrace Loves Lace xa iyonke, umlawuli woyilo wophawu ugqibezela. Ishishini ngokubanzi likhula kakhulu minyaka le, iZiems zibonisa. Ukusukela ekubeni iindaba malunga nokusasazeka kukaHollie, sazisa iqoqo lethu le-Elixir elibonisa iimpahla zam zeGLL endizithandayo. Siphinde savula amagumbi okubonisa e-LA naseLondon konke ngaphakathi kwiinyanga ezilishumi elinambini ezifanayo. I-brand iye yavelisa inkolo elandelayo kunye nemidiya yoluntu-kubandakanya iPinterest- yinxalenye enkulu yalonto.
Idayimani emnyama yokufaka igolide
ibhedi yendlu yamantombazana
ilokhwe yomtshakazi epinki negolide
ukuba uza kuba noyisezala na ngekrisimesi